Gawaarida iibinta, garsoorayaasha yaryar ee iibka, matoorrada dc matoor, matoorrada qalabka hydraulic, geerashyada iibka, xirmooyinka biraha ee iibka
K taxanaha qalabka xiisaha leh ee kuxiran mashiinka mashiinka xijaabka ee xiisaha leh (shiidaalka, hufnaanta gudbinta sare), Bevel gear matoorku waa nooc ka mid ah qalabka wax lagu beero ee hepatical. Waa matoor gaar ah oo loogu talagalay tamarteyaasha kala duwan. Qalabkiisa wuxuu ku dhegan yahay nooca Gleason quasi-hyperbolic nooca, xiishkuna waa ilko dusha adag. Waxay leedahay awood wax ku ool ah oo weyn iyo dhawaq yar. Nolosha dheer, hufnaanta sare, hawlgalka xasilloonida, iwm, waxqabadka mashiinka oo dhan wuxuu aad uga fiican yahay matoorka cycloid revenueer iyo matoorista dixirista mashiinka dixirka, kaas oo si weyn loo aqoonsaday loona adeegsado adeegsadayaasha. Gawaarida xiiqda ayaa waxaa wado V-suunka. Mootada waxaa ku dhaqaajinaya suunka si ay u wadaan qaybta soo galinta. Warshadda waxaa lagu qalabeeyay V-suunka caadiga ah. Markii la isticmaalayo matoor waxyaabaha qarxa, waa in la istcimaalaa suunka loo yaqaan 'V-beldi-ka-aaladda' isticmaalaha ku habboon).
1. Gawaarida nooca 'K tax gear motor' waxaa loo sameeyay si waafaqsan shuruudaha farsamada ee caalamiga ah waxayna leedahay maadooyin saynis iyo farsamo sare leh.
2. Taxanahan gawaarida gawaarida waxay badbaadisaa booska, waa mid la isku halleyn karo oo waarta, waxayna leedahay awood xad dhaaf ah, iyo awooddu waxay gaari kartaa wax kabadan 200KW.
3, isticmaalka tamarta hooseeya, waxqabadka sareeya, hufnaanta matoorka gaasta ilaa 95%.
4. Gawaarida nooca taxanaha ah ee loo yaqaan 'travel bevel gear motor' ayaa leh gariir hoose, dhawaqa hooseeya iyo keydinta tamarta sare.
5, xulo qalab aad u fiican oo loo yaqaan '20CrMnTi', iyo ka dib karbinta iyo joojinta daaweynta kuleylka, dusha sare ee dusha sare waxay gaari kartaa 58-62HRC, qulqulaya ilkuhu, saxitaanku waxay gaari karaan 5-6, oo leh saxsanaanta sare, gudbinta xasilloonida, mugga mugga yar ee awoodda, Cimri dheer iyo astaamo kale.
6. Qalabka toosan ka dib, matoorka qalabka oo ka kooban gunta faashad, qalabka bevel iyo isu gudbinta qalabka bevel waxaa lagu qalabeeyay noocyo kala duwan oo matoorro ah si loo sameeyo is dhexgalka elektromechanical, kaas oo si buuxda u dammaanad qaadaya astaamaha tayada ee alaabada gawaarida xiiqda.
Sogears Motors iyo Generators waxay soo bandhigaan tiro balaaran oo la isku halleyn karo oo tayo sare leh oo ay weheliso matoorrada korantada iyo matoorrada loo qorsheeyay inay si kalsooni leh ugu shaqeeyaan nooc kastoo damac ah. Bixiyeyaasha Qiimaha Sogears waxay soo bandhigaan soo-jeedinta idman ee iibka, taageerada, adeegga.
Qiyaasta saamiga xawaaraha: 5.36 ~ 197.37, isku darka taxanaha / taxanaha R waxay gaari kartaa 32625
Xaddiga Torque: 200 ～ 50000 Nm
Xaddiga awoodda: 0.18 ~ 200 kW
K-shaft kordhin, kor u qaadista KA-shaft
KF-shaft kordhinta, kor u qaadida KAF-shaft dhajinta, dhajinta aaladda
S- waxay muujineysaa soo-galinta dhidibka. Taxanahan wuxuu lamid yahay gawaarida 'taxane gear motor' waxaana loo adeegsan karaa isweydaarsiga. Si kastaba ha noqotee, iyada oo loo eegayo saamiga xawaaraha isku mid ah, isla awoodda iyo lambarka isku midka ah, tornaanka soo-saarka ee taxanaha K ayaa ka weyn soosaarka soo-saarka gawaarida taxanaha ee 'S'.
Moodooyinka ugu waaweyn ee matoorrada qalabka taxanaha K waa KA: K / KA / KAF37, K / KA / KAF47, K / KA / KAF57, K / KA / KAF67, K / KA / KAF77, K / KA / KAF87, K / KA / KAF97, K / KA / KAF107, K / KA / KAF127, K / KA / KAF157, K / KA / KAF167, K / KA / KAF187
1.Harbor iyo dhoofinta
2.Hoist iyo gaadiid
5.Cement iyo dhismaha
6.Pighter warshadaha iyo iftiinka
Warshadaha kiimikada ah ee loo yaqaan '7.Chemikaarikada iyo ilaalinta deegaanka.Etc.
Kala soocidda matoorka qalabka bevel
Gawaarida dhimista ee bevel waxaa loo qaybin karaa ilko toosan, ilig cirfiir leh iyo ilig wareegsan iyadoo loo eegayo qaabka khadka iligga; Ilkaha iliga ah waxay u qaybsan yihiin ilig qaanso, ilko dibadeedka dheer (oo loo yaqaan ilkaha cycloidal) iyo ilkaha ka go'an. In kasta oo ilig ciribta ahi waxyar ka weyn yihiin iligga tooska ah, hadana aad bay u xasaasi u tahay qaladka, sidaa awgeed waxa si tartiib tartiib ah loogu badalaa ilig cadayga ah. Gears-ka-goynta beeli-galka leh ee leh tuubbooyinka shaashadda leh ayaa ka liita tartanka ay ku jiraan ilkaha cirifka ah iyo cirbadaha-beedka loo yaqaan 'cycloidal bevel Gears' sababtuna tahay qalab qalafsan oo ay adag tahay in la xakameeyo meesha lala xiriirayo ee dusha ilkaha. Waa la baabi'iyey oo laguma soo gelin Shiinaha. Mashiinka noocan ah ee wax lagu shiido.
Raadi bevel heical gawaarida gawaarida dheeri 1/2 HP, 3/4 HP, 2 HP matoorrada korantada iibka ka iibiya shiine caan soo saaraha nooc caan ah oo leh 1 / 3HP Reliance Duty-Master Motor oo leh Gear Reducer ratio of 40: 1. Taxanahan mootada yar ee cabbirka yar leh wuxuu leeyahay awood mashiin ah 4kW-250kW Ogeysiis la xiriira joojinta wax soo saarka: Waxaan joojineynaa iibinta noocyada qaar K taxanaha iibka ah. Marka lagu daro matoorrada tooska loo rakibo ee loo yaqaan 'AC matoorrada' sogears-ka 'Modular geared system' waxay ka dhigeysaa waddo iswaafajsan dalabyo ballaaran oo kala duwan.
Qaabka loo yaqaan 'bevel gear motor' waa fidinta K-shaft, kor u qaadista lugta, kor u qaadida KA-shaft, kordhinta KF-, kor u qaadida, kor u qaadida KAF, kor u qaadka, KS- waxay muujineysaa soo jiidashada isbadalka.
Tallaabooyinkeeda farsamo guud ahaan waa:
Awoodda: 0.12KW ~ 200KW
Torque: 10N · m ilaa 58500N · m
Xawaaraha wax soo saarka: 0.08 ~ 263r / min
Qalabkan 10-120: 1 ee korontada ku shaqeeya wuxuu leeyahay matoor hooseeya wuxuuna bixiyaa awood iyo xawaare u dhigma tarjumaadda RC ee qayb yar oo ka mid ah qiimaha.
K taxanaha gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida ah, Qiimaha hoose ee gawaarida gawaarida gawaarida & gawaarida gawaarida leh, 3, 5, 6, 200 21 noocyada kala duwan ee saamiga qalabka ee aad adigu doorato. Waxay leedahay 20 KW awood iyo 1350 rpm oo lagu qiimeeyo tiirarka Waxaan sharaxnay sida xawaaraha mootadu ugu kala duwan yihiin AC iyo DC matoorrada iyo qaababka ay u sameeyaan taallo. Iyada oo loo yaqaan 'A gearbox' - oo loo yaqaan 'gear reducer' ama "xawaaraha yareeya", waxay ka kooban yihiin koronto koronto, geerisyo, iyo badeecooyin guryaha ku yaal waxaana caadi ahaan loo adeegsadaa codsiyada u baahan qaddar xoog badan (tikniko).
The helical-bevel gear motor, oo sidoo kale loo yaqaan dib-u-kobcinta "K-taxanaha", ayaa ku jira qaab gudbinta saddex-marxaladood ah oo ka kooban laba qaybood oo ah geerashyo iskuuleed iyo hal geesood. Gudbinta noocan ahi waxay leedahay hufnaan aad u sarreysa, adkeyn sare, torque sare, awood adkaysasho iyo buuq yar. Waxaa lala barbar dhigi karaa servo motor lagana shaqeyn karaa matoor asal ahaan loo yaqaan 'saddex-wajiile'. Dib-u-habeynta servo-ga ee hektarka ah ee ay soo saartey shirkaddu waxay leedahay nolol adeeg dheer iyo dab-weyn.
Gear Motors-ka waxaa lagu sameeyaa seddex taxane oo moodal ah oo leh barakicitaano u gaar ah usheeda dhexe iyo Naqshadeynta naqshadeynta ilkaha gaarka ah iyo waxyaabaha lagu xayiro waxay bixiyaan hawl aamusnaan ah, habsami leh awood kasta iyo saamiga. Caawinaad ayaa had iyo jeer laga heli karaa midkoodna adeegga macaamiisha, iibka.
Si balaadhan looga isticmaalo mashiinnada cuntada, mashiinnada daabacaadda, mashiinnada macdanta, mashiinka waardiyaha iyo mashiinnada fiilooyinka, mashiinnada weelasha lagu qaado, mashiinnada kiimikada, mashiinnada dharka, daabacaadda iyo mashiinnada iyo makiinadaha dawooyinka.
Sooderayaashayadu waxay si toos ah ugu calaamadeysan yihiin Motors Gear. Qalabka korantada AC iyo DC, isku mid ah, dib u laaban karo, saxanka gawaarida gawaarida gawaarida. 1.9 RPM 115 Volt AC 100 in-lb Sogears Gearmotor. Lambarka Shayga: 5-1820-2 5 Kujira keydka Ka iibso Gear Motor qiimaha ugu fiican Shiinaha ama Hindiya kana soo iibso Sogears. Tiro aad u ballaaran oo ah Mootooyin Geared ah oo ku dhex jira bakhaarkeenna, Qiimaha Jumlada ah iyo Rar Bilaash ah.
Qalabka Sogears 'Fraarm-Gearmotors. VFD-keena cusub ayaa u oggolaanaya mashiinnada mootooyinka lagu daro mashiinnada sida caadiga ah laga helo noocyo kala duwan oo xawaare ah. Motor & Gear Engineering, waxaan ahaan jirnay hogaamiyaha heer caalami naqshadeynta, injineernimada iyo soo saarida qalabka iyo geesaha. Iibinta iyo Dayactirka Matoorada Korontada iyo Darawalada.
Qalabka wax lagu xirto ee loo yaqaan 'cycloidal bevel gear' wuxuu qodayaa ilkaha qulqulaya, iyo dhererka iligga ee dhibic kasta oo lasocda kooneynta waa mid joogto ah; dardar, cirifka iyo qalabka beeluhu waxay yareeyaan ilkaha foosha, laga bilaabo dhamaadka weyn ee (ilka kore). Iyada oo la adeegsanayo tilmaanta korantada isku-xirida ilaa cidhifka yar (dhamaadka gudaha) ee iligga, dhererka iligga ayaa tartiib tartiib u yaraanaya.
Sogears AC Gearmotors waxaa lagu heli karaa noocyo kala duwan oo torque ah oo u dhexeeya 15 illaa 1827 in-lbs xagal qumman iyo naqshado isdabajoog ah oo leh warshadaha. o Gearmotors-ka & Xawaarayaasha Xawaaraha ee Iibinta aduunka oo dhan, NEW Oriental Motor 1/19 HP Single Phase Gearmotor. Tirinta: GEA2049. Saamiga 1: 0. Soo-saare: sogears.
Gawaarida tooska ah ee loo yaqaan bevel gear ayaa leh xoog yar oo falo iyo nidaam taageero ah oo fudud; si kastaba ha noqotee, shahaadada lamaani waa mid yar, qaladku waa mid xasaasi ah, dhawaquna waa weyn yahay. Guud ahaan waxaa loo adeegsadaa gudbinta xawaaraha durugsan ee durugsan sida baabuurta kaladuwan iyo garsooraha culus ee farsamada gacanta.
Marka la barbar dhigo garsooraha cirridka iyo garsooraha hevel bevel, gearing bevel gevel waxay leeyihiin shahaadooyin aad u badan, iyo meelaha iliga lagala kulmo waxay leeyihiin hirar aad u ballaaran oo curvature ah; meelaha ilkaha dusha sare ee taabashada ay fududahay in la xakameeyo; khaladaad yar kama qabaan. Awooda xamuulka badan awgeed, gudbinta waa mid deggan oo buuqduna way yar tahay. Caadi ahaan loo istcimaalo gudbinta sida wadista bartamaha gawaarida kaladuwan, cagaf-cagafyo iyo helikobtarro.
Shaati Dia. (Mm)
Soosaarka Flange Dia. (Mm)
Torque Oggolow (Nm)
1. Wax soo saarka tooska ah, qaab dhismeedka is haysta, wareejinta torque sare ee dusha sare ee ilkaha adag, qalabka saxda ah ee sareeya ayaa xaqiijinaya hawlgal xasilloon, buuq hooseeya iyo nolosha adeegga oo dheer.
2, habka loo rakibo: rakibida cagaha, rakibida faashad dabacsan, rakibida flange, rakibida gacanta torque, rakibida flange yar.
3. Qaabka gelitaanka: iskuxirka tooska tooska ah ee gawaarida, isku xirka suunka mootada ama gundhigga isweydaarsiga, isweydaarsiga flange flange.
4. Qaabka wax soo saarka: soosaarka qulqulka qulqulaya ama wax soo saarka qulqulka adag, celceliska waxqabadka waa 94%.
5, iyo isku darka taxanaha R wuxuu heli karaa saamiga xawaaraha weyn.
Mashiinka mootooyinka faras weyn, matoorrada, matoorrada mashiinka isbarbar socda, iyo mishiinnada xawaaraha gawaarida yareeya, waxaan ku beddeli karnaa 90V ama 180VDC mashiinnada mootooyinka lagu iibiyo sogears, Markaad u yeerto sogears maareeyaha iibka korantada ee gobolka si aad uga jawaabto adiga, waan kuu jawaabi doonnaa.
Sogears Electric Electric waxay ku takhasustay iibinta iyo hagaajinta matoorrada korantada, bambooyinka, gudbinta korantada, iyo qalabka warshadaha ee la xiriira.
Codsiga matoorka qalabka beeruhu leeyihiin:
Waxaa hadda si muuqata looga dhex arkaa nidaamyada gudbinta ee noocyada kaladuwan ee mashiinnada, laga soo bilaabo maraakiibta, gawaarida, meelaha gawaarida laga raaco, mashiinada culus ee dhismaha, qalabka wax lagu farsameeyo iyo qalabka wax soosaarka otomaatiga ee loo adeegsado warshadaha mashiinka, illaa inta ugu badan nolosheena maalinlaha ah. Qalabka guriga, saacadaha, iwm. Codsiyadaadu waxay isugu jiraan gudbinta awood sare ilaa xamuul yaryar, gudbinta saxda ah, iyo codsiyada warshadaha, matoorrada gawaarida leh ayaa leh khiyaano iyo koror culus. Sidaa darteed, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qalabka xawaaraha iyo qalabka wareejinta. Gawaarida gawaarida Bevel waa mootada banaanka ah ee qasabka ah ee gawaarida cirbixiyeyaasha leh ee ay soo saartaan heerka xirfadeed ee heerka sare ee ZBJ19004. Waxaa si balaadhan looga isticmaalaa macdanta, macdanta, wiishashka, gaadiidka, sibidhka, dhismaha, kiimikada, dharka, daabacaadda iyo dheehista, dawooyinka iyo wixii la mid ah. duurka.
Xitaa a 250 HP Electric Motors waxaan ku lamaaneyn karnaa matoorradeena gawaarida waana iib. Maaddaama aan nahay shirkad caalami ah oo matoorro ah, waxaan bixinnaa noocyo kala duwan oo ah AC Motors iyo DC Motors oo ay ku jiraan Traction Motors, Horizontal iyo nooca taagan. Bixinta meel kasta oo adduunka ah oo ka socota Shiinaha, Sogears Direct waxay bixisaa xulashada iyo aqoonta ugu fiican ee matoorrada korantada, qalabka dayactirka, matoorrada geardada iyo qalabyada si loo helo waxay u baahan yihiin.
Qalabka Helical, Gawaarida beeruhu wataan, Qalabka Bevel, Gawaarida Bevel, Gawaarida Helical Geelle, Spvel Bevel Gear Motors